အမေရိကန်မှာ ဆေးရုံ ကို အခြားရောဂါနဲ့ သွားပြရင်း လူ (၇၄၀၀) ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ် နှင့် မြန်မာပြည် – Let Pan Daily
အမေရိကန်မှာ ဆေးရုံ ကို အခြားရောဂါနဲ့ သွားပြရင်း လူ (၇၄၀၀) ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ် နှင့် မြန်မာပြည်
Let Pan | October 4, 2020 | Local News | No Comments
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဆေးရုံ ကို အခြားရောဂါ နဲ့သွားပြရင်း လူနာ ၇၄၀၀ ကို ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခဲ့သတဲ့။ အမေရိကန်ကူးစက်ရောဂါဌာန CDC ရဲ့ဒေတာတွေအရ မေလလယ်နဲ့ ဇူလိုင်လလယ်မှာ အမေရိကန်ဆေးရုံတွေမှာ အဲ့လိုကူးစက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Massachusettes ပြည်နယ် Boston ရှိ Brigham and Women’s Hospital က ကူးစက် ရောဂါပါရဂူ Dr. Meghan Baker က အဲ့ဒီလိုကူးစက်မှာကြောက်ပြီး ဆေးရုံဆေးခန်း မပြရင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ပိုကြီးနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
သူတို့ဆီမှာတော့ ဟုတ်တာပေါ့၊ ကျနော်တို့ ဆီမှာရော ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? လူနာတွေ အကူးစက်ခံရမှာအပြင်၊ ကုသပေးသူ ဆရာဝန်ကြီးတွေ၊ ပရဟိတလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေ အတွက်ပါ စဉ်းစားရပါမယ်။ သို့သော် ကိုဗစ်ကူးမှာကြောက်ပြီး ဆေးရုံမသွားရင် ကိုယ့်ရောဂါကြောင့် ပို အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဆေးရုံဆေးခန်း တွေမှာ ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု မရှိရေးဆိုတာ အမြဲ ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေရတဲ့အရာပါ။ အမေရိကန်လိုခေတ်မီပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ ဆေးရုံမျိုးမှာတောင် ကူးစက်မှုတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဆီမှာ ပိုပြီးဂရုစိုက်ဖို့လိုလာပါပြီ။
Dr. Baker တို့ရဲ့ ဆေးရုံတွေမှာ မကူးစက်ဖို့ ရောက်လာတဲ့ လူနာတိုင်းကို Test လုပ်ခြင်း၊ လူတိုင်းကို mask ဝတ်ခိုင်းခြင်းတို့ လုပ်ပါသတဲ့။ Dr. Baker တို့ရဲ့ Brigham and Women’s Hospital မှာတော့ အခုချိန်အထိ ကူးစက်မှု case နှစ်ခုပဲဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အမေရိကန်ကူးစက်ရောဂါဌာန CDC ရဲ့ဒေတာအရ အမေရိကန်ရှိ ဆေးရုံတွေရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ဆေးရုံအတွင်း မကူးစက်ရေး မဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားရုန်းကန်နေရတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ကျနော် တို့ဆီမှာလည်း ဆေးရုံဆေးခန်းတွေဟာ ကိုဗစ်ကူးစက်ပြန့်ပွားတဲ့နေရာ မဖြစ်ဖို့၊ ကိုယ်ကနေသူများကို မကူးစက်ဖို့နဲ့ သူများကနေ ကိုယ့်ကို မကူးစက်ဖို့ ဆင်ခြင်နိုင်ရန်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ေဆး႐ုံ ကို အျခားေရာဂါ နဲ႔သြားျပရင္း လူနာ ၇၄၀၀ ကို ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ခဲ့သတဲ့။ အေမရိကန္ကူးစက္ေရာဂါဌာန CDC ရဲ႕ေဒတာေတြအရ ေမလလယ္နဲ႔ ဇူလိုင္လလယ္မွာ အေမရိကန္ေဆး႐ုံေတြမွာ အဲ့လိုကူးစက္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Massachusettes ျပည္နယ္ Boston ရွိ Brigham and Women’s Hospital က ကူးစက္ ေရာဂါပါရဂူ Dr. Meghan Baker က အဲ့ဒီလိုကူးစက္မွာေၾကာက္ၿပီး ေဆး႐ုံေဆးခန္း မျပရင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ပိုႀကီးႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုလိုက္ပါတယ္။
သူတို႔ဆီမွာေတာ့ ဟုတ္တာေပါ့၊ က်ေနာ္တို႔ ဆီမွာေရာ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ? လူနာေတြ အကူးစက္ခံရမွာအျပင္၊ ကုသေပးသူ ဆရာဝန္ႀကီးေတြ၊ ပရဟိတလိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့သူေတြ အတြက္ပါ စဥ္းစားရပါမယ္။ သို႔ေသာ္ ကိုဗစ္ကူးမွာေၾကာက္ၿပီး ေဆး႐ုံမသြားရင္ ကိုယ့္ေရာဂါေၾကာင့္ ပို အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ ေဆး႐ုံေဆးခန္း ေတြမွာ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ မရွိေရးဆိုတာ အၿမဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနရတဲ့အရာပါ။ အေမရိကန္လိုေခတ္မီၿပီး သန္႔ရွင္းတဲ့ ေဆး႐ုံမ်ိဳးမွာေတာင္ ကူးစက္မႈတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုလာပါၿပီ။
Dr. Baker တို႔ရဲ႕ ေဆး႐ုံေတြမွာ မကူးစက္ဖို႔ ေရာက္လာတဲ့ လူနာတိုင္းကို Test လုပ္ျခင္း၊ လူတိုင္းကို mask ဝတ္ခိုင္းျခင္းတို႔ လုပ္ပါသတဲ့။ Dr. Baker တို႔ရဲ႕ Brigham and Women’s Hospital မွာေတာ့ အခုခ်ိန္အထိ ကူးစက္မႈ case ႏွစ္ခုပဲျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ အေမရိကန္ကူးစက္ေရာဂါဌာန CDC ရဲ႕ေဒတာအရ အေမရိကန္ရွိ ေဆး႐ုံေတြရဲ႕ တစ္ဝက္ေလာက္ဟာ ကိုဗစ္-၁၉ ေဆး႐ုံအတြင္း မကူးစက္ေရး မျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနရတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ က်ေနာ္ တို႔ဆီမွာလည္း ေဆး႐ုံေဆးခန္းေတြဟာ ကိုဗစ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားတဲ့ေနရာ မျဖစ္ဖို႔၊ ကိုယ္ကေနသူမ်ားကို မကူးစက္ဖို႔နဲ႔ သူမ်ားကေန ကိုယ့္ကို မကူးစက္ဖို႔ ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
စင်ကာပူထက် (၂)ဆ ကျယ်ဝန်းမယ့် ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်း ကို နိုင်ငံပေါင်း (၉) နိုင်ငံ စိတ်ဝင်စား
ကေလးငယ္ ႏွစ္ဦး ကို သားမယားျပဳက်င့္ သည့္ အသက္ (၆၀) အ႐ြယ္ရွိ အမ်ိဳးသားကို ဖမ္းဆီး
ကိုယ်ပိုင် ကားတွေ အပြင်မထွက်ရ တဲ့ အပေါ်လောင်မြိုက်နေ သူတွေ ထားရမယ့် ကိုယ်ချင်းစာ တရား